Izithombe Zediphozi | Martech Zone
Sisebenzisa ithani le- izithombe zesitoko esingenabukhosi. Kusuka kumasayithi ethu, okuthunyelwe kubhulogi, amaphepha amhlophe, kanye nakho konke okuqukethwe esikukhiqizela amaklayenti, isikweletu sethu sesitoko sasiyikhulu lamadola ngenyanga. Kubonakale sengathi lapho nje ngigcwalisa i-akhawunti, izobe ingenalutho kungakapheli isonto noma kunjalo. Sikhokhe amanani aphezulu ngesiza esaziwa kakhulu sesitoko.
Izithombe ezingekho emthethweni, noma ze-RF, zivumela ukusetshenziswa okulinganiselwe kwezithombe ngaphandle kwesidingo sokukhokhela ukusetshenziswa ngakunye. Isibonelo, uma sithenga isithombe esingenabukhosi esizeni sethu, singasisebenzisa kaninginingi kusayithi lethu nakwisibambiso sethu (kuya ngomthengisi). Kodwa-ke, asikwazi ukuthengisa kabusha noma ukusisebenzisela iklayenti lethu. Futhi uma siyisebenzisela iklayenti lethu, asikwazi futhi ukuyisebenzisela isibambiso sethu. Qaphela kakhulu lapho ufunda ukuphrinta okuhle ekusetshenzisweni! Ezinye zenzelwe ukusetshenziswa okungeyona eyezentengiso kuphela, ezinye zingaba nezikhathi noma inani lokusetshenziswa okunomkhawulo.
Uma wephula imigomo yokusetshenziswa ezithombeni zakho ezingenayo imali yobukhosi, ungahlatshwa incwadi evela kumnikazi wamalungelo. Ngokuvamile bafuna amakhulu noma izinkulungwane zamaRandi ukubuyisela ukusetshenziswa kabi… futhi basongele izinyathelo zomthetho uma ungathobeli. Iningi labantu lifunda nje isifundo salo, likhokhe isikweletu, bese liqhubeka.
Ibiza malini i-Royalty-Free Stock Photos?
Kunezindleko ezahlukahlukene zezithombe zesitoko namapulatifomu amaningi asebenza ohlelweni lwamaphoyinti. Udinga ngempela ukuhumushela amakhredithi kumadola. Amanye amapeni ambalwa, kuya ngosayizi wesithombe… amanye angaba amadola amaningana ngesithombe ngasinye. Futhi ezinye ziyizindleko ngesithombe ngasinye ngokusetshenziswa!
Asinankinga nokukhokha imali eningi njengoba besenza ngoba besazi ukuthi isithombe sibucayi kangakanani kukho konke esikwenzayo. Abantu bawubukela phansi kakhulu umthelela isithombe esihle esinawo emyalezweni abazama ukuwukhuluma. Futhi abantu abasebenzisa i-Google Image Search futhi bathembele kusesho lwayo olungenayo imali yobukhosi bacela inkinga! Izikhathi eziningi isithombe sisetshenziswa kabi futhi i-Google Image Search isithola kusayithi elisebenzisa kabi, kukhombisa ukuthi asinabukhosi uma singekho.
Kuliqiniso… Isithombe Silungile Amagama Ayizinkulungwane
Siphila ezweni elibukwayo. Ngakho-ke uma uzimisele ukukhokha amakhulukhulu amadola ngokuqukethwe, ukutshala imali esithombeni esihle akuyona into enhle! Futhi i-DepositPhotos isanda kungeza ithuluzi le-Reverse Image ekuxubeni kwabo! Ngaphandle kwezithombe, zinikeza futhi:
Izithombe zeVector - Qalisa ukuklama iphepha elimhlophe noma i-infographic ngamasethi wesithombe sazo esimangalisayo nokunye izithombe zevector.
imifanekiso - Awudingi i-vector? Vele ulande ifayela le- imifanekiso engenabukhosi udinga.
Amavidiyo - Ufuna ukufaka ividiyo ethile yesitoko engemuva kusayithi lakho noma ividiyo ethile yesitoko yokuhlanganiswa kwakho kwevidiyo okulandelayo? Banokukhethwa okuhle.
Izithombe Zokuhlela - Ufuna ezinye izithombe zokusebenzisa okungezona ezentengiselwano? Banokukhethwa okuhle kwezithombe zomkhiqizo nezosaziwayo ezingasetshenziselwa okuqukethwe kokuhlela.
Umculo - Udinga umculo othile we-podcast noma isingeniso sevidiyo naphandle? Banokukhethwa okuhle futhi!
Kuze kwaba yilapho iqembu selikhona Depositphotos ungithintile mayelana nebhulogi yethu nokusetshenziswa kwethu kwezithombe zesitoko engibone ukuthi sisebenzisa imali eningi kakhulu kunalokho ebesingaba nakho. IDepositphotos manje isingumxhasi wethu futhi isinikeza izithombe zethu zesitoko ku- Martech Zone kanye nezinye izinkampani zami. Yize lokho kuyisivumelwano esihle kithina, amanani akho ayamangalisa futhi!
Ngokwehla okungama- $ 29 ngenyanga, ungasebenzisa kufika ku-30 izithombe zesitoko esingenabukhosi inyanga ngayinye kusuka eDepositphotos! Leyo yintengo enhle futhi ilungele ibhizinisi elijwayelekile elikhiqiza okuthunyelwe kwebhulogi, amaphepha amhlophe, izifundo zamacala, ukubizelwa ezenzweni, ukwakhiwa kwewebhu, namakhasi okufika! Faka isithombe sesitoko esingenayo imali emyalezweni wakho futhi uzobona ukuthi imiphumela yakho izothuthuka kanjani!
Ukudalula: Sisebenzisa eyethu isixhumanisi sokubambisana for IdiphozithiIzithombe kulokhu okuthunyelwe!
Tags: amadingathola izithombe onlineusesho lwesithombe se-googlebuyisela isithombebuyisela emuva ukubheka isithomberfabasebukhosini mahhalaizithombe zesitoko esingenabukhosiUmxhasiizithombe zesitoko